Jabuuti oo qaadeysa Xayiraadda ka dhalatay faafidda…
Xukumadda Jabuuti ayaa ku dhawaaqday in ay qaadeyso xannibaadda ka dhalatay fayruska Corona oo saaran dalkaas, waxaana ay tilmaamtay in amarrada intooda badan la qafiifinayo si nolosha dadka sidii dib loogu soo celiyo.
Jabuuti ayaa shaacisay in sababta go’aankaan dhalisay in ay tahay sidii dadka dib u bilaabi lahaayeen raadinta nolol maalmeedkooda, maadaama waqti dheer ay ku sugan guryahooda, isla markaana la xiray goobaha isu imaatinka Bulshada oo ay ku jiraan Suuqyada.
Arrintaan kama dhigna in guud ahaan cudurka laga waayay Jabuuti balse Dowladdu waxa ay tilmaamtay in hoos u dhac ballaaran uu ku yimid faafidda fayruska marka lala barbar dhigo todobaadyadii lasoo dhaafay.
Wasaaradda Caafimaadka Jamhuuriyadda Jabuuti ayaa 24-kii saac ee lasoo dhaafay waxa ay sheegtay in baaris ay ku sameysay 228-ruux cudurka laga helay 22-qof oo kaliya, taasina ay muujineyso in hoos u dhac uu ku yimid awoodda faafitaankiisa.
Guud ahaan Jabuuti cudurka waxa uu ku dhacay 1331-ruux, kadib markii baaris la marsiiyay 17,106-qof oo looga shakiyay fayrusku sida ay shaacisay Wasaaradda Caafimaadka Jamhuuriyadda Jabuuti.
Waxaa ka caafimaaday xannuunka coronavirus dalka Jabuuti 950-ruux, halka 4-qof ay u dhinteen, waxaana sidaasi diiwaangelisay Hay’adda Caafimaadka Qaramada Midoobay ee WHO loosoo gaabiyo.
Xannibaadda Jabuuti waxa ay bilaabatay 18-kii March, kadib markii kiisaskii ugu horeeyay ee Xannuunka dilaaga ah ee Covid-19 laga helay, waxaana uu ku faafay saldhigga Ciidamada Mareykanka ay ku leeyihiin Jabuuti.